Khasaare Ka Dhashay Dagaal Maanta Ka Dhacay B/weyne – Goobjoog News
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maanta magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo sidoo kale dabley hubeysan oo gaadiid isbaaro u dhiganayey.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan, Xuseen Cismaan Muumin ayaa u sheegay Goobjoog News, in dagaalkan uu dhacay kadib markii ciidamada ammaanka lagu soo wargeliyey koox hubeysan oo dhac u geysanayey gaadiid marayey xaafadda Howlwadaag ee B/weyne.
Waxa uu guddoomiye ku xigeenka xaqiijiyey in raggan ay rasaas kala hor yimaadeen ciidamada ammaanka, waxaana halkaasi ku dhaawacantay Afar qof oo Saddex kamid ah ahaayeen raggii gaadiidka baaranayey.
“Ciidamada xoogga dalka waxay aadeen burcad gaadiid ku haystay xaafadda Howlwadaag, waxay doonayeen in gaadiid badan ay baartaan, khasaare ayaa soo gaaray, qaarna gacanta ayaa lagu hayaa kuwo kalena waa la daba joogaa” ayuu yiri Muumin.
Ugu dambey, guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan gacmaha ka laaban doonin cid walbo oo carqalad ku haysa amniga gobolkaasi.
Ciidamada Itoobiya Oo Howlgallo Ka Wada Bariga Gobolka Galgaduud
DEG DEG: Xukun Dil Ah Oo Lagu Riday Saddex Ka Mid Ah Raggii Loo Haystay Dilka Iyo Kufsiga Caa’isha Ilyaas
Zryiua hcioas Cialis in usa generic cialis for sale
Rfrste aqlvwb Viagra order canadian pharmacy cialis 20mg
Zkxypp mqfixb generic ed drugs when will cialis be over the counter
Nbhnve fupfmp walmart pharmacy Xkcuk...
buy generic viagra online canada https://viatribuy.com/...
where to buy fish mox https://amoxycillin1st.com/...
Ynhwhd oepsif canada online pharmacy Lewic...